Mmebusɛm 31 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
ƆHENE LEMUEL NSƐM (1-31)
Ɔyere pa, hena na obenya? (10)
Ɔpɛ adwuma, na ɔyɛ adwumaden (17)
Ayamye wɔ ne tɛkrɛma so (26)
Ne mma ne ne kunu yi no ayɛ (28)
Ahoɔfɛ twam ntɛm (30)
31 Ɔhene Lemuel nsɛm. Ɛyɛ nsɛm a emu yɛ duru a ne maame de yɛɛ ɔkasakyerɛ maa no:+ 2 O me ba, dɛn na menka nkyerɛ wo,O me yafunu mu ba, dɛn na menka,Dɛn koraa na menka, O me bɔhyɛ ba?+ 3 Mfa w’ahoɔden mma mmea,+Na mfa akwan a ɛsɛe ahemfo no so.+ 4 O Lemuel, ɛmfata ahemfo,Ɛmfata ahemfo sɛ wɔbɛnom nsã,*Na ɛmfata ahemfo sɛ wobebisa sɛ, “Me nsã wɔ he?”+ 5 Na wɔannom amma wɔn werɛ amfi nea wɔahyɛ ato hɔ,Na wɔantiatia mmɔborɔwafo fahodi so. 6 Momfa nsã a ano yɛ den mma wɔn a wɔrewu,+Na momfa nsã* mma wɔn a wɔabotow.*+ 7 Momma wɔnnom na wɔn werɛ mfi wɔn hia;Mommma wɔnnkae wɔn haw bio. 8 Kasa ma wɔn a wontumi nkasa,Pere wɔn a wɔrewu no ahofadi ma wɔn.+ 9 Kasa na bu atɛntrenee;Pere mmɔborɔwafo ne ahiafo ahofadi ma wɔn.*+ א [Aleph] 10 Ɔyere pa,* hena na obenya?+ Ne bo yɛ den sen ɛpo mu abohene* koraa. ב [Beth] 11 Ne kunu de ne koma nyinaa gye no di,Na adepa biara mmɔ ne kunu. ג [Gimel] 12 Ne nkwa nna nyinaa,Ɔde papa tua ne kunu ka, na ɛnyɛ bɔne. ד [Daleth] 13 Ɔhwehwɛ ntama pa ne nwera;Ɔde ne nsa yɛ adwuma anigye so.+ ה [He] 14 Ɔte sɛ oguadini ahyɛn;+ Ɔde n’aduan fi akyirikyiri ba. ו [Waw] 15 Ade nnya nkyee koraa no, na wasɔre,Na wama ne fifo aduan,Na ɔde ne mmaawa nso aduan* ama wɔn.+ ז [Zayin] 16 Odwen asaase ho, na ɔtɔ;Ɔde nea wabrɛ anya* yɛ bobefuw.* ח [Heth] 17 Osiesie ne ho ma adwumaden,*+Na ɔhyɛ n’abasa mu den. ט [Teth] 18 Ohu sɛ n’aguadi ma onya mfaso;Ne kanea nnum anadwo. י [Yod] 19 Ɔde ne nsa so asaawa donno mu,Na ɔde ne nsa so akorokorowa mu.*+ כ [Kaph] 20 Ɔteɛ ne nsa ma mmɔborɔwafo,Na obue ne nsam ma ahiafo.+ ל [Lamed] 21 Onsuro sɛ awɔw bɛde ne fifo,*Efisɛ ne fifo nyinaa hyehyɛ ntaade a ɛma wɔn ho yɛ wɔn hyew.* מ [Mem] 22 Ɔyɛ ɔno ara ne mpasotam. Ne ntama yɛ nwera ne ntama afasebiri. נ [Nun] 23 Wonim ne kunu yiye wɔ kurow apon ano,+Baabi a ɔne asaase no so mpanyimfo tena no. ס [Samekh] 24 Ɔpam ntaade* tɔn,Na ɔde abɔso ma aguadifo. ע [Ayin] 25 Ntama a efura no yɛ ahoɔden ne anuonyam,Na ɔde ahotoso hwɛ daakye kwan.* פ [Pe] 26 Obue n’ano nyansam;+Ayamye mmara* wɔ ne tɛkrɛma so. צ [Tsade] 27 Ɔhwɛ ne fifo adwuma so,Na onni anihaw aduan.+ ק [Qoph] 28 Ne mma sɔre, na wɔfrɛ no anigye;Ne kunu sɔre, na oyi no ayɛ. ר [Resh] 29 Mmea pii bɔ mmɔden,*Na wo de, wokyɛn wɔn nyinaa. ש [Shin] 30 Ahoɔfɛ krabɛhwɛ betumi ayɛ nnaadaa, na ahoɔfɛ tumi twam ntɛm,*+Na ɔbea a osuro Yehowa de, wobeyi no ayɛ.+ ת [Taw] 31 Momma no akatua wɔ nea ɔyɛ ho,*+Na momma ne nnwuma nyi no ayɛ wɔ kurow apon ano.+
^ Anaa “wɔn kra abotow.”
^ Anaa “Di ma mmɔborɔwafo ne ahiafo.”
^ Anaa “Ɔyere a ɔbɔ mmɔden.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “adwuma.”
^ Anaa “Ɔde ne mfaso.” Nt., “ne nsa ano aba.”
^ Nt., “Ɔde ahoɔden bɔ n’asen.”
^ Asaawa donno ne akorokorowa yɛ nnua a na wɔde bobɔw hama anaa wɔde yɛ hama.
^ Anaa “Onsuro sɛ sukyerɛmma bɛtɔ ama awɔw ade ne fifo.”
^ Nt., “ntaade a ɛbɔ so abien.”
^ Anaa “ataade nhyɛase.”
^ Anaa “ɔbɛserew daakye.”
^ Anaa “Akwankyerɛ a ɔdɔ wom; Ɔdɔ a enni huammɔ mmara.”
^ Anaa “Mmea pii yɛ mmea pa.”
^ Anaa “ahoɔfɛ nka hwee.”
^ Nt., “Momma no ne nsa ano aba.”